Bye...Bye: Andrea Pirlo Oo Warqaddiisa Caydhinta La Qoray Iyo Tababaraha Cusub Ee Jurgen Oo Lasii Ogaaday - Laacib
HomeSerie ABye…Bye: Andrea Pirlo Oo Warqaddiisa Caydhinta La Qoray Iyo Tababaraha Cusub Ee Jurgen Oo Lasii Ogaaday
Bye…Bye: Andrea Pirlo Oo Warqaddiisa Caydhinta La Qoray Iyo Tababaraha Cusub Ee Jurgen Oo Lasii Ogaaday
April 30, 2021 Abdiwahab Ahmed Serie A, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa shaqada ka caydhinaysa tababaraheeda Andea Pirlo kaddib xilli ciyaareed dhibaato badan oo ay lumiyeen horyaalkii ay sagaalka sannadood sida xidhiidhka ah ugu soo guuleysteen ee Serie A iyo sidoo kale Champions League oo ay kaga hadheen wareegga 16ka.
Juventus oo kaalinta afraad kaga jirta horyaalka Serie A, ayaa waxay 13 dhibcood ka dambaysaa Inter Milan oo hoggaanka haysa, waxaanay kaliya u dagaallamaysaa sidii ay uga mid noqon lahayd kooxaha usoo gudbaya tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka dambe.
Dareenka ka jira kooxda ayaan fiicnayn, waxaana jira khilaaf gudaha ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababarka ah.
Agaasimaha ciyaaraha Juventus ee Fabio Paratici ayaa toddobaadkan markii ay Fiorentina ka badisay Juventus, waxa la weydiiyey in kooxdu ay shaqada tababarenimada ka caydhinayso Andrea Pirlo haddii ay ka mid noqon waayaan afarta ugu sarraysa oo ay sidaas kaga hadhaan Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Paratici oo ka jawaabayay su’aashan oo Sky Italia weydiisay ayaa yidhi: “Xataa ma tixgelinayno in dookha ah in aanu ku guul-darraysanayno in aanu ka maqnaano Champions League.”
Jawaabtan ayaa waxa laga fahmay in, kooxdu ay mar horeba gaadhay go’aanka shaqo ka caydhinta Andrea Pirlo.
Laakiin qofka kaliya ee shaqadiisa waayaya ma noqonayo Andrea Pirlo, waxaase raacaya Paratici iyo shaqsiyaad kale, xataa madaxweynaha kooxda ee Andrea Agnelli ayaa la sheegayaa in ay suurtogal tahay in uu iscasilo oo qof kale oo qoyskooda ahi uu la wareego maamulka.
Wararka laga helayo waddanka Talyaaniga ayaa waxay sheegayaan in Andrea Pirlo uu haddaba isasii ogyahay in shaqada uu waayey oo kaliya uu kooxda sii joogayo kulamada kooban ee ka hadhsan xilli ciyaareedkan.
Tababaraha cusub ee Juventus ay magacaabayso ayaa waxa la sheegay in uu yahay Maximilliano Allegri oo tan iyo intii uu iska casilay kooxdan aan wax shaqo ah qabanin.
Muad kadar says:
Ina noqdo juweer kubada heer ka gaadho